Laba Xiddigle Bashiir: Tusaalihii Daacadnimada - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Tiro dad ah oo isugu jira ciidan iyo rayid ayaa ku dhintay qaraxii maanta ka dhacay laamiga hor mara madaxtooyada Soomaaliya.
Inta dhimatay Allaha u naxariista inta dhaawacan tayna Eebbe ha bogsiiyo.
Dadka dhintay waxaa ku jira Allah ha u naxariistee Laba xiddigle Bashiir oo ahaa askari muddo dheer ka shaqeynayay Illinka hore ee laga soo galo madaxtooyada.
Wuxuu ahaa nin wanaagsan. Wuxuu ahaa askari daacad ah. Wuxuu ahaa nin dhowrsan oo dad la dhaqan wanaagsan.
Wuxuu ahaa nin aad u af gaaban oo aan dadka la murmin. Wuxuu ahaa nin aan dadka dhibin oo si nabad doonimo ah u kala haga gaadiidka faraha badan ee maalin kasta gala kana soo baxa madaxtooyada.
Ma maleynayo in uu jiro qof 3 jeer ka badan dan ka yeeshay madaxtooyo oo aan xusuusan Bashiir – Waa Suurto gal in uusan magaciisa u aqoon.
Bashiir waxa uu tilmaan u ahaa askariga wanaagsan ee ku dayashada mudan. In ka badan 7 sano oo aan Albaaskaas galayay ama ka soo baxayay waan arkayay Bashiir, isagoo labbisan, waliba si wanagsan u labbisan.
Waligii ma arkin isagoo kala daadsan, Isagoo dad la murmaya ama isagoo xanaaqsan. Inta badan dadka jidkaas adeegsada wuu bar garanayay,qofkii uusan garanna wuxuu weydiin jiray caddeyn iyo aqoonsi tii u fudud.
Ma garanayo waxa loogu daro Bashiir. Waa tusaale cad oo ka markhaati kacaya dhowrsanaantiisa. Intii arki jirtay ama la macaamishay waan hubaa in ay sidaas la tahay.
Qarax hore oo isla goobta ka dhacay, ayuu Bashiir ku dhaawacmay, balse dhaawacaas wuu ka kacay.
Ilaahey doonistiisa ayay ku ahaatay in uu maanta ku naf waayo qarax gaari, isagoo u taagan shaqo maalmeedkiisa, una adeegaya dalkiisa iyo dadkiisa.
Samaanta Bashiir waxaa ka markhaati kacay bani’aadmigii la macaamilay oo dhan.
“Ummaddeydu Xumaan iskuma raacdo” Sidaas waxaa yiri Nabigeenna NNKH.
Allaha u naxariisto Laba xiddigle Bashiir, Tusaalihii Askariga Wanaagsan, Waddaniga daacadda ah iyo Howl-kama daalaha anshaxa leh.
Mas’uuliyiinta Qaranka ugu sarreeya kuwii hore iyo kuwa hadda jooga, oo aan hubo in ay si fiican u garanayaan daacadnimadii iyo howl karnimadii Marxuum Bashiir, waxaa xil ka saaran yahay daryeelka qoyskii Bashiir oo dalkaan u dhibtooday, u dhaawacmay, una dhintay.
W/Q: Liibaan Cabdi Cali